အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: မြဝတီမြို့တွင် ဇနီမောင်နှံနှစ်ယောက်အား ထော်လာဂျီနဲ့ အတိုက်ခံရသဖြင့် ဇနီးသေဆုံး
၌ စက်တက်ဘာ (၁၆)ရက်နေ့က
ကို ထော်လာဂျီနှင့်တိုက်မိသောကြောင့် ဇနီးသည်မှာ
ယင်းနေရာ၌ပင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထော်လာဂျီနှင့် အတိုက်ခံရသော ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကို မြဝတီဆေးရုံ
ကိုရောက်အောင် ပါဝင်ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသော မြဝတီမြို့ စေနာ နာရေး
ကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌ ဦးလှထွန်းက ထော်လာဂျီနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးအတိုက်ခံ
" သူ့တို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်က စိုက်ခင်းမှ ဆိုက်ကယ်နဲ့ ပြန်လာတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ နောက်ကနေပြီးတော့ ထော်လာဂျီက ဝင်တိုက်တဲ့အတွက်
အမျိုးသမီးမှာ ယင်းနေရာမှာပင် သေးဆုံးသွားပါတယ်။
အမျိုးသားကတော့ အခုမြဝတီဆေးရုံကို ပို့ထားပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ အမျိုသမီးက ထော်လာဂျီအောက်မှာပါသွားပါတယ်။
လက်ကိုပွတ်တိုက်ပြီး သေဆုံးသွားပါတယ်။ အခု မြဝတီဆေးရုံ ရေခဲတိုက်ထဲမှာ
ထားပါတယ်။ အမျိုးသားမှာတော့ လက်၊ ခြေထောက်နဲ့ ခေါင်းမှာနည်းနည်း
အခြေအနေကတော့ ကောင်းပါတယ်။ နာမည်ကိုတော အတိအကျမ
သိရသေးဘူးဗျ။" ဟု ပြောသွားသည်။
အမည်မသိရတဲ့ ထော်လာဂျီတိုက်ခံရ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်မှာ မြဝတီမြို့
အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်မှ ဖြစ်ပြီး နှစ်ယောက်လုံးက အသက်(၄၀)ကျော်ဖြစ်ကြောင်း
ထော်လာဂျီနဲ့တိုက်သွားတဲ့ တရားခံကို ဘယ်လိုမျိုးအမှုစီရင်နေတာကိုသိလို၍
မြဝတီမြို့ ရဲစခန်းနှင့် ယာဉ်ထိန်းမှူးကို ဆက်သွယ်သော် အဆက်
Arakan Times သတင်းဌာန.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:29 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook